PSJTV | कोरोनाबाट जोगिन काठमाडौं
काठमाडौँ : लकडाउनले काठमाडौंको बसाइ कठिन भएको भन्दै गाउँ जानेको लर्को लागेका बेला प्रदेश १, २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सर्वसाधारण कोरोनाबाट सुरक्षित ठानेर उपत्यकामा आउन थालेका छन् । काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकाबाट सोमबार बिहानसम्म निर्बाध रूपमा आए । सञ्चारमाध्यमले निगरानी गर्न थालेपछि भने प्रहरीले बाहिरबाट आउने यात्रुको विवरण टिप्न थालेको छ ।
नागढुंगा प्रहरीले बाहिरबाट आउने यात्रुलाई उपत्यका भित्रिनुको कारणसमेत सोधेको थियो । काठमाडौंमा घर र कोठामा आएको भन्ने कारण टिपाएका छन् । ‘हामी आफन्त भेट्न विराटनगर गएका थियौँ । लकडाउनले रोकिएका थियौं,’ सुजन राईले भने, ‘उता भन्दा काठमाडौंमा सुरक्षित पनि लाग्यो । अनि आफन्त पनि यतै भएकोले आएको हौं ।’ लकडाउनले रोकिएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले गाडीको व्यवस्था गरेर पठाएको उनले बताए ।केही दिनयता मात्रै १ सय ४५ वटा बस काठमाडौं भित्रिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । नागढुंगा चेकपोस्टले गाडी नम्बर र यात्रु संख्या टिपेर सवारी छाड्ने गरेको थियो । तर, सोमबार बिहान भने प्रदेश २ को राजविराजबाट आएको लालिमा यातायातका तीन वटा बस पौने ८ बजे यात्रु लिएर आएको पाइएपछि फर्काइयो । तर, बस फर्किएन । केही तल पीपलमोडमा पार्किङ गरेर यात्रु ओराल्यो । यात्रु भने हिँडेरै आए । चेकपोस्टभन्दा केही तल असईको नेतृत्वमा उनीहरुलाई रोक्न प्रहरी खटिएका थिए । केही बेर रोके पनि । २० जना जति भएपछि प्रहरीले ४/५ जनाको समूह बनाउँदै चेकपोस्टतिर पठाए । यी तीन वटा बसका यात्रुहरुमध्ये केहीको प्रहरीले नाम, ठेगाना पनि टिपोट गरे । केही त्यतिकै आए । चेकपोस्ट हुँदै यात्रुबाहक बस आउने क्रम जारी थियो । कुनै खाली हुन्थ्यो त कुनैमा यात्रु । यात्रु भएका बसलाई भने प्रहरीले फिर्ता पठाइदिन्थ्यो । तर, केही तल यात्रु छाडेर बसचाहिँ फेरि चेकपोस्टतिरै फर्किन्थ्यो । प्रहरीले ती बसलाई भने थानकोटतिर आउन रोकेको थिएन । निर्बाध रूपमा आइरह्यो ।
‘हामी धादिङबाट आएका होइनौं । हामीले प्रहरीको कर्या चेकपोस्ट हुँदै नागढुंगा आइपुगेका थियौं,’ नागढुंगामा रोकिएका पवित्रराज खत्रीले भने, ‘रोक्ने भए हामीलाई विराटनगरमै किन नरोकेको ? बाटोभरिको प्रहरीले किन नरोकेको ? यहाँ आएर हामीलाई दिनभरि अलपत्र पारेर साझमा छाड्यो ।’ दिउँसो १ बजे सीडीओ नै चेकपोस्टमा आएपछि आफूहरुलाई छाड्ने उनीहरुले आशा गरेका थिए । साँझसम्म पनि नछाडेपछि साना दूधेबालक भएका यात्रुहरु आत्तिएका थिए ।
नाकामा एम्बुलेन्ससहितको स्वास्थ्यकर्मीको खाँचो रहेको महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठले बताए । उनले भने ‘अहिले त स्वंयसेवकको भरमा हेल्थ डेस्क चलेको छ ।’ लकडाउन हुनुभन्दा केही दिन अघि चन्द्रागिरी नगरपालिकाले २४ घण्टा स्वास्थ्यकर्मी राखेर परीक्षण गरेको थियो । केही दिनपछि दिउँसो मात्रै भयो । अहिले योङ डक्टरर्स एसोसिएसनले गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटका प्रहरी प्रमुख घनश्याम श्रेष्ठले नागढुंगा नाका हुँदै यात्रुबाहक बसमा यात्रु ल्याउन कडाइ गरेको बताए । ‘काठमाडौं प्रवेश गर्ने बसले यात्रु ल्याउन पाउँदैन । यात्रु ल्याएको पाइएमा फिर्ता गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने, ‘फिर्ता गरेको बसमा आएका यात्रु अन्यत्र बाटो हुँदै यदाकदा फर्केर आउने गरेका छन् । यसतर्फ पनि निगरानी बढाएका छौँ ।’कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
कोरोनाले भन्दा बढी सरकारी उपेक्षाले लिँदै छ नागरिकको ज्यान
काठमाडौं : मुलुकको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनूसूची अद्यावधिक गर्न सरकारले पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा सिंगो सदन एकमत देखिएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा ...